Izinqolobane ze-Dow AgroSciences - Ilungelo Lethu lase-US Lokwazi
Idatha entsha yemithi yokubulala izinambuzane ekudleni iphakamisa imibuzo yokuphepha
Posted on November 23, 2016 by UCarey Gillam
Njengoba abaseMelika beqoqa imindeni yabo ukuthi babelane ngesidlo se-Thanksgiving kuleli sonto, idatha entsha kahulumeni inikeza ukuhlolwa okungenakuphikisa kokuphakelwa kokudla kwase-US: Izinsalela zezinhlobo eziningi zemithi yokubulala izinambuzane, ama-fungicides kanye namakhemikhali okubulala ukhula zitholakale kumaphesenti angama-85 ezinkulungwane zokudla ihlolwe.
Imininingwane ekhishwe ngesonto eledlule nguMnyango Wezolimo wase-United States ikhombisa amazinga ahlukahlukene ezinsalela zezibulala-zinambuzane kukho konke kusuka kumakhowe kuya kumazambane kanye namagilebhisi kuya kubhontshisi oluhlaza. Isampula elilodwa lama-strawberry laliqukethe izinsalela zemithi yokubulala izinambuzane engama-20, ngokusho kwe- “Uhlelo Lwemininingwane Yezinambuzane” (PDP) ukhishwe kule nyanga yi-USDA's Agricultural Marketing Service. Lo mbiko ungowama-25 wonyaka wokuhlanganiswa kwemininingwane yezinsalela ze-ejensi, futhi wahlanganisa izibonelo zalokho okwenziwa yi-USDA ngonyaka ka-2015
Kuyaphawuleka ukuthi le nhlangano ithe amaphesenti ayi-15 kuphela amasampuli ayi-10,187 ahlolwe ayengenazo izinsalela ze-pesticides ezitholakalayo. Lowo umehluko ophawulekayo kusukela kowezi-2014, lapho i-USDA yathola ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-41 amasampula “ayehlanzekile” noma engabonisanga izinsalela ze-pesticides ezitholakalayo. Iminyaka engaphambilini ibuye ikhombise cishe amaphesenti ama-40-50 wamasampula njengamahhala ezinsalela ezitholakalayo, ngokusho kwedatha ye-USDA. I-USDA ithe "akuvumelekile ngokwezibalo" ukuqhathanisa unyaka owodwa neminye, kepha, ngoba ukuxubana kwesampuli yokudla kuyashintsha unyaka nonyaka. Noma kunjalo idatha ikhombisa ukuthi u-2015 wayefana neminyaka eyedlule kulezo zithelo nemifino esanda kucutshungulwa neyacutshungulwa yakha inqwaba yokudla okuhloliwe.
Yize kungazwakala kunganambitheki, izinsalela ze-pesticides aziyona into abantu abangakhathazeka ngayo, ngokusho kwe-USDA. Le nhlangano ithe "izinsalela ezitholakale emikhiqizweni yezolimo ezisampuliwe zisezingeni elingazibeki engcupheni impilo yabathengi futhi ziphephile…"
Kepha abanye ososayensi bathi akukho lwazi oluncane lokusekela leso simangalo. Abalawuli abanalo ucwaningo olwanele oluphelele mayelana nokuthi ukusetshenziswa njalo, okuphindaphindwayo kwezinsalela zezinhlobo eziningi zemithi yokubulala izinambuzane kuyithinta kanjani impilo yomuntu esikhathini eside, futhi nokuqinisekisa kukahulumeni ukuphepha kumane kungamanga, kusho abanye ososayensi.
“Asazi ukuthi uma udla i-apula elinezinsalela eziningi nsuku zonke uzoba yini umphumela eminyakeni engu-20 usendleleni,” kusho uChensheng Lu, onguprofesa ohlotshaniswa nesayensi yokuchayeka kwemvelo eHarvard School of Public Health. “Bafuna ukuqinisekisa wonke umuntu ukuthi lokhu kuphephile kodwa isayensi ayanele. Udaba olukhulu lolu. ”
I-USDA ibike embikweni wayo wakamuva ukuthi amasampula angama-441 atholakele abhekwe njengabakhathazayo “njengokwephula ukubekezelela okucatshangelwayo,” ngoba izinsalela ezitholakele zingaphezulu kwalokho okulondwe yi-Environmental Protection Agency (EPA) noma zitholakale ekudleni akulindelekile ukuthi ziqukathe izinsalela zezibulala-zinambuzane nhlobo futhi ezingekho ezingeni lokubekezelelana ngokomthetho. Lawo masampuli aqukethe izinsalela zemithi yokubulala izinambuzane ehlukene engama-496, kusho i-USDA.
Isipinashi, ama-strawberry, amagilebhisi, ubhontshisi obuluhlaza, utamatisi, ukhukhamba kanye nekhabe kwakuphakathi kokudla okutholakala namazinga ezinsalela zemithi yokubulala izinambuzane engekho emthethweni. Ngisho nezinsalela zamakhemikhali osekuyisikhathi eside zivinjelwe e-United States zitholakele, kufaka phakathi izinsalela ze-DDT noma ama-metabolites ayo atholakala kusipinashi namazambane. I-DDT yavalwa ngo-1972 ngenxa yezinkinga zezempilo nezemvelo mayelana nesibulala-zinambuzane.
Ukungabikho kwedatha ye-USDA bekukhona noma yiluphi ulwazi ngezinsalela ze-glyphosate, noma ngabe i-glyphosate kade yaba umuthi osetshenziswa kakhulu emhlabeni futhi uvame ukufuthwa ngqo ezitshalweni eziningi, kufaka phakathi ummbila, isoya, ukolweni, ne-oats. Kuyisithako esiyisihluthulelo somuthi obizwa ngokuthi yi-Roundup herbicide kaMonsanto Co., futhi kwamenyezelwa i-carcinogen yabantu ngonyaka odlule yiqembu lososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba abasebenza neWorld Health Organisation. Kepha iMonsanto ithe izinsalela ze-glyphosate ekudleni ziphephile. Inkampani icele i-EPA ukuthi khuphula amazinga okubekezelelana i-glyphosate ekudleni okuningana ngo-2013 futhi i-EPA yenze njalo.
Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa nakho njalo ngonyaka kusampula ukudla kwezinsalela zezibulala-zinambuzane. Imibhalo emisha etholwe kwi-FDA ikhombisa amazinga angekho emthethweni ezinhlobo ezimbili zemithi yokubulala izinambuzane - i-propargite, esetshenziselwa ukubulala izibungu, ne-flonicamid, evame ukuhloselwa ukubulala ama-aphid nezimpukane ezimhlophe - zisanda kutholakala kuju. Imibhalo kaHulumeni ikhombisa nokuthi i-DEET, into ejwayelekile yokuxosha izinambuzane, isanda kutholwa ngabalawuli kuju, kwathi i-herbicide acetochlor yatholakala kumakhowe.
Ososayensi be-FDA baphinde babika amazinga aphezulu ngokungemthetho we-neonicotinoid thiamethoxam atholakala elayisi, ngokusho kwemininingwane evela ku-ejensi. Syngenta ubuzile Isikhungo Sokuvikelwa Kwezemvelo ukuvumela izinsalela eziphakeme ze-thiamethoxam ezivunyelwe ezitshalweni eziningi ngoba inkampani ifuna ukuthi isetshenziswe kakhulu njengesifutho seqabunga. Lesi sicelo ne-EPA sisalindile, ngokusho kokhulumela i-ejensi.
The umbiko wakamuva wezinsalela zomphakathi ekhishwe yi-FDA ikhombisa ukuthi amazinga okwephula izinsalela zezibulala-zinambuzane abelokhu ekhuphuka eminyakeni yamuva. Ukwephulwa kwezinsalela kumasampula okudla kwasekhaya kufinyelele kumaphesenti angama-2.8 ngonyaka wezi-2013; kuphindwe kabili isilinganiso esibonwe ngonyaka ka-2009. Ukwephula umthetho kufinyelele kumaphesenti ayi-12.6 kokudla okuthengwa kwamanye amazwe ngo-2013, kusuka kumaphesenti ama-4 ngo-2009.
Njenge-USDA, i-FDA yeqe i-glyphosate emashumini eminyaka yokuhlolwa kwezinsalela ze-pesticide. Kepha le nhlangano yethule uhlelo lwe- “Isabelo esikhethekile” kulo nyaka ukunquma ukuthi yimaphi amazinga we-glyphosate angahle abonakale eqenjini elincane lokudla. Usokhemisi we-FDA ubike ngokuthola izinsalela ze-glyphosate uju futhi imikhiqizo eminingi ye-oatmeal, kufaka phakathi ukudla kwezingane.
Private idatha yokuhlola okukhishwe kule nyanga kubike nokuba khona kwezinsalela ze-glyphosate kuma-cheerios cereal, amakhukhi e-Oreo nokunye ukudla okuthandwa kakhulu okuhlanganisiwe.
IMIBUZO NGEMIPHUMELA EQUBUKA
Ukuthi abathengi kufanele bakhathazeke noma cha ngokudla okuqukethe izinsalela zezibulala-zinambuzane kuyindaba yengxabano eqhubekayo. Abathathu bezinhlangano zikahulumeni ezibandakanyeka ezindabeni zezinsalela zezibulala-zinambuzane zonke zikhomba kulokho ezikubiza ngokuthi "imikhawulo yezinsalela ephezulu" (MRLs), noma "ukubekezelelana," njengezimpawu zokuphepha. I-EPA isebenzisa imininingwane enikelwe imboni yezolimo ukusiza ukuthola ukuthi ama-MRL kufanele asethelwe kuphi umuthi wokubulala izinambuzane ngamunye nesitshalo ngasinye okulindeleke ukuthi kusetshenziswe kuso izibulala-zinambuzane.
Uma nje ukudla okuningi okusampuli kubonisa izinsalela zemithi yokubulala izinambuzane ekudleni okungezansi kwama-MRL, asikho isizathu sokukhathazeka, i-USDA igcina kanjalo. "Ukubikwa kwezinsalela ezikhona emazingeni angaphansi kokubekezelelwa okukhona kusebenza ukuqinisekisa nokuqinisekisa ukuphepha kokutholakala kokudla kwaboHlanga," kusho umbiko wezinsalela zango-2015. Imboni yezolimo inikezela ngeziqinisekiso ezibanzi, ithi akukho lutho olwesabayo ngokusebenzisa izinsalela zamakhemikhali ewathengisela abalimi ukuthi bawasebenzise ekukhiqizweni kokudla, noma ngabe kudlula ukubekezelelana okusemthethweni.
Kepha ososayensi abaningi bathi ukubekezelelana kuklanyelwe ukuvikela abasebenzisi bezibulala-zinambuzane ngaphezu kwabathengi. Ukubekezelelana kuyahlukahluka kakhulu kuye ngokuthi umuthi wokubulala izinambuzane kanye nesitshalo. Ukubekezelela isibulala-zinambuzane i-chlorpyrifos e-apula, ngokwesibonelo, kwehluke kakhulu kunenani lama-chlorpyrifos avunyelwe kwizithelo ezisawolintshi, noma kubhanana noma obisini, ngokuya ngemininingwane yokubekezelelana kukahulumeni.
Endabeni yama-chlorpyrifos, i-EPA empeleni ithe ifuna ukuhoxisa konke ukubekezelela ukudla ngoba izifundo zixhumanise ikhemikhali ukulimala kwengqondo ezinganeni. Yize i-ejensi isikhathi eside ibheka izinsalela ze-chlorpyrifos ziphephile, manje i-ejensi ithi, kungenzeka ukuthi akunjalo.
“I-EPA, ngalesi sikhathi, ayikwazi ukunquma ukuthi ukuvezwa okuhlanganisiwe kwezinsalela zama-chlorpyrifos, kufaka phakathi konke ukuvezwa okulindelekile kokudla kanye nakho konke okunye ukuvezwa okungekho emsebenzini okunemininingwane ethembekile, kuphephile,” i-EPA kusho ngonyaka odlule. IDow AgroSciences, eyakha ama-chlorpyrifos ngawo-1960, uyabhikisha imizamo ye-EPA, iphikisana nokuthi ama-chlorpyrifos "iyithuluzi elibucayi" kubalimi. Embikweni wezinsalela zakamuva ze-USDA, i-chlorpyrifos itholakale kumapentshisi, ama-apula, isipinashi, ama-strawberry, ama-nectarine nokunye ukudla, yize kungenjalo emazingeni athathwa njengokwephula ukubekezelelana.
I-EPA ivikela umsebenzi wayo ngokubekezelelana, futhi ithi ibilokhu ihambisana noMthetho Wokuvikelwa Kwekhwalithi Yezokudla odinga ukuthi i-EPA ibheke imiphumela yokuqoqeka kwezinsalela zezinto “ezinendlela efanayo yobuthi.” Isikhungo sithi ukusetha ukubekezelelana kwezibulala-zinambuzane, kubheka izifundo ezilethwe izinkampani zokubulala izinambuzane ukuthola imiphumela engaba yingozi ikhemikhali elingaba nayo kubantu, inani lekhemikhali elingahlala ekudleni noma ekudleni nokunye okungavezwa kulo lelo khemikhali.
Kepha abagxeki bathi lokho akwenele ngokwanele - ukuhlolwa kufanele kubhekwe izimo ezingokoqobo ezibhekela imithelela ebanzi yokuqoqwa kwezinhlobo eziningi zezinsalela zezibulala-zinambuzane ukuthola ukuthi kuphephe kangakanani ukudla imixube ebonwa ekudleni kwansuku zonke, bathi. Njengoba kunikezwe ukuthi izibulala-zinambuzane eziningi ezisetshenziswa kakhulu ekukhiqizweni kokudla zixhunyaniswe nezifo, ukwehla kokusebenza kwengqondo, ukuphazamiseka kokukhula, kanye nokushoda kokunaka / ukukhubazeka ezinganeni, kunesidingo esiphuthumayo sokuhlaziywa okujulile kwale mithelela yokuqoqeka, ngokusho kososayensi abaningi. Bakhomba iNational Research Council's isimemezelo Eminyakeni edlule lokho “ukudla okudliwayo kumelela umthombo omkhulu wokuchayeka kwezinsana nezingane ezinganeni, futhi ukutholakala kokudla kungabangela ukwanda kwezingozi zezempilo ezinganeni uma kuqhathaniswa nabantu abadala.”
"Ngokuchayeka kuyo yonke indawo imixube yamakhemikhali, iziqinisekiso zokuphepha ezincike ezinhlwini zemingcele enobuthi zingadukisa impela," kusho uLorrin Pang, isazi sezendalo eMnyangweni Wezempilo waseHawaii futhi owayengumeluleki we-World Health Organization.
UTracey Woodruff, owayengusosayensi ophakeme we-EPA futhi engumeluleki wezinqubomgomo ogxile kakhulu ekungcoliseni imvelo nasempilweni yezingane, uthe kunesidingo esicacile sokuthi kwenziwe olunye ucwaningo. UWoodruff uqondisa uHlelo Lwezempilo Yokuzala kanye Nezemvelo eNyuvesi yaseCalifornia San Francisco School of Medicine.
“Akuyona into encane le,” kusho yena. “Umqondo wonke wokubheka ukutholakala kokuqoqeka uyisihloko esishisayo kososayensi. Ukuhlola ukubekezelelana komuntu ngamunye sengathi kwenzeka ngasodwana akuyona inkomba enembile yalokho esikwaziyo - abantu bavezwa amakhemikhali amaningi ngasikhathi sinye futhi izindlela ezisetshenziswayo njengamanje azikwenzi lokho ngokwesayensi. ”
Abagxeki bathi ukuhlolisiswa kokuphepha kwezibulala-zinambuzane kungenzeka kunciphise isinqumo sikaMongameli-okhethwe uDonald Trump sokuqamba igama UMyron Ebell ukwengamela imizamo yezinguquko e-EPA. U-Ebell, umqondisi we-Centre for Energy and Environment e-Competitive Enterprise Institute, ungummeli oqinile wezibulala-zinambuzane nokuphepha kwazo.
“Amazinga ezibulala-zinambuzane kuyaqabukela, uma kwenzeka, esondela emazingeni angaphephile. Noma izishoshovu zikhala impisi ngoba izinsalela zidlula umkhawulo kahulumeni lokho akusho ukuthi imikhiqizo ayiphephile, ”kusho i SAFEChemicalPolicy.org Iqembu lika-Ebell ligijima. "Empeleni, izinsalela zingaba ngaphezu kwamakhulu emikhawulo yokulawula izikhathi eziphindwe kayikhulu kodwa zihlale ziphephile."
Imiyalezo exubile yenza kube nzima ukuthi abathengi bazi ukuthi yini okufanele bayikholelwe ngokuphepha kwezinsalela zezibulala-zinambuzane ekudleni, kusho uTherese Bonanni, ingcweti kwezokudla e-Jersey Shore University Medical Center.
"Yize umphumela wokuqoqwa kokudla la ma-toxin isikhathi eside ungaziwa, imininingwane yesikhashana ikhombisa ukuthi kunesizathu sokuqapha," esho. "Umyalezo oya kubathengi udideka kakhulu."
(I-Article ivele okokuqala ku- I-Huffington Post)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane IDow AgroSciences, EPA, FDA, Ukudla, GMO, Monsanto, UMyron Ebell, izibulala-zinambuzane, SAFEChemicalPolicy.org, Syngenta, USDA
Ukugcina Izimfihlo Kubathengi: Umthetho Wokulebula Ukuwina Kokusebenzisana Kwemboni Nezemfundo
Posted on July 15, 2016 by UCarey Gillam
Uyizwile imantra kaninginingi - azikho izinkinga zokuphepha ezihambisana nezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo. Lowo mkhuba, umculo wezindlebe zezimboni ze-agrichemical kanye ne-biotech, uculwe kaningi ngabenzi bomthetho baseMelika abasanda kuphasisa umthetho kazwelonke ovumela izinkampani ukuthi zigweme ukusho emaphaketheni okudla uma leyo mikhiqizo inezithako ezakhiwe ngokwezakhi zofuzo.
USenen Pat Roberts, oweluse umthetho ngeSenethi, ukuchithile ukukhathazeka kwabathengi kanye nocwaningo oludale ukwesaba mayelana nezingozi zezempilo ezingaba khona ezihlobene nezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo, ekunxenxenxeleni lowo mthethosivivinywa.
"Isayensi ikufakazele kaninginingi ukuthi ukusetshenziswa kwe-biotechnology kwezolimo kuphephile ngamaphesenti ayi-100," URoberts umemezele esiteji seSenethi ngoJulayi 7 ngaphambi kokudluliswa komthethosivivinywa. Indlu yabe isivuma lesi silinganiso ngoJulayi 14 evotini elingu-306-117.
Ngaphansi komthetho omusha, manje osubheke etafuleni likaMengameli u-Obama, imithetho yombuso egunyaza ukufakwa kwe-GMO ayisebenzi, futhi izinkampani zokudla akudingeki zitshele abathengi ngokusobala ukuthi ukudla kuqukethe izithako ezakhiwe ngezakhi zofuzo; esikhundleni salokho bangafaka amakhodi noma amakheli ewebhusayithi kumikhiqizo abathengi okufanele bayifinyelele ukuthola ulwazi lwesithako. Umthetho ngenhloso wenza kube nzima kubathengi ukuthi bathole imininingwane. Abenzi bomthetho abanjengoRoberts bathi kulungile ukufiphaza izingqinamba kubathengi ngoba ama-GMO aphephe kakhulu.
Kepha abathengi abaningi balwele iminyaka ukuthi ukudla kubhalwe ngokuqukethwe kwe-GMO ngokunembile ngoba abazemukeli izimangalo zokuphepha. Ubufakazi bethonya lobumbano kwabaningi emphakathini wesayensi abathi ukuphepha kwe-GMO sekwenze kwaba nzima kubathengi ukuthi bazi ukuthi ngubani okumele bathembe nokuthi yini okufanele bayikholelwe ngama-GMO.
“'Isayensi' seyiphenduke ipolitiki futhi yagxila ekuthengiseni izimakethe,” kusho uPamm Larry, umqondisi weqembu labathengi leLabelGMOs. "Umkhakha ulawula ukulandisa, okungenani ezingeni lezepolitiki." U-Larry namanye amaqembu asekela ukufaka amalebuli athi kunezifundo eziningi ezibonisa ukuthi ama-GMO angaba nemithelela emibi.
Kuleli sonto, tiphephandaba laseFrance i-Le Monde ungeze isizathu esisha sokungabaza ngezimangalo zokuphepha ze-GMO lapho iveza imininingwane ye-University of Uprofesa waseNebraska uRichard Goodman's sebenzela ukuvikela nokukhuthaza izitshalo ze-GMO ngenkathi uGoodman ethola uxhaso kumqambi wezitshalo weGMO uMonsanto Co kanye nezinye izinkampani zezitshalo nezamakhemikhali. Ukuxhumana nge-imeyili okutholwe ngezicelo zeFreedom of Information kukhombisa ukuthi uGoodman ubonisana noMonsanto njalo ngemizamo yokubuyisa imizamo yokuphoqeleka yokuphawula nge-GMO nokunciphisa ukukhathazeka kokuphepha kwe-GMO njengoba uGoodman enza "ukufinyelela kwezesayensi nokubonisana ngokuphepha kwe-GM" e-United States, e-Asia nase-European Union .
UGoodman ungomunye wososayensi abaningi baseyunivesithi yomphakathi abenza lo msebenzi. Ukusebenzisana okufanayo kudalulwe muva nje okubandakanya ososayensi bomphakathi emanyuvesi amaningana, kufaka phakathi iYunivesithi yaseFlorida neYunivesithi yase-Illinois. Ngokuqoqayo, ubudlelwano bugcizelela ukuthi iMonsanto nabanye abadlali bemboni balisebenzisa kanjani ithonya enkundleni yesayensi yama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane ukusunduza amaphuzu avikela inzuzo yabo.
Ekuhlolweni kwayo kwalezo zinto ezikhathazayo, i-athikili yeLe Monde kukhanya kanjani ukuthi uGoodman, obesebenza eMonsanto iminyaka eyisikhombisa ngaphambi kokuthuthela eyunivesithi yomphakathi e2004, waqokwa njengomhleli ohambisanayo wephephabhuku lesayensi Ukudla neKhemikhali Toxicology (FCT) ukwengamela imibiko yocwaningo ehlobene ne-GMO. Ukuqamba kukaGoodman ibhodi lokuhlela le-FCT kwenzeka ngemuva nje kokuba iphephabhuku lithukuthelise uMonsanto ngokushicilelwa kowezi-2012 kocwaningo olwenziwe ngusosayensi wezinto eziphilayo waseFrance uGilles-Eric Séralini othole ukuthi ama-GMO kanye ne-Monsanto's glyphosate herbicide angadala izicubu eziyingozi kumagundane. Ngemuva kokuthi uGoodman ejoyine ibhodi lokuhlela le-FCT lo magazini wahoxisa isifundo ngo-2013. (Kwakungu waphinde washicilelwa kumagazini ohlukile.) Abagxeki ngaleso sikhathi kusolwa ukuhoxiswa uboshwe ekuqokweni kukaGoodman ebhodini lokuhlela iphephabhuku. UGoodman ukuphikile noma yikuphi ukubandakanyeka ekuhoxisweni, futhi wesula kwi-FCT ngoJanuwari 2015.
Umbiko weLe Monde kubalulwe ukuxhumana kwe-imeyili okutholwe yiqembu lase-US lokukhuthaza abathengi i-US Right to Know (engikusebenzela). Ama-imeyili atholwe yile nhlangano akhombisa uGoodman exhumana noMonsanto ngokuthi angalugxeka kanjani lolu cwaningo lwaseSéralini ngemuva nje kokuthi lukhishwe "ngaphambi kokuphrinta" ngoSepthemba 2012. Ku-imeyili kaSepthemba 19, 2012, UGoodman wabhalela isazi sezobuthi saseMonsanto uBruce Hammond: “Uma nina bafana ninamaphuzu okukhuluma, noma ukuhlaziywa kwenhlamvu, ngingajabula.”
Ama-imeyili akhombisa nokuthi umhleli we-FCT kuChief Wallace Hayes uthe uGoodman uqale ukusebenza njengomhleli ohambisanayo we-FCT ngoNovemba 2, 2012, kuyo leyo nyanga isifundo seSéralini sanyatheliswa, yize uGoodman wacashunwa kamuva ethi akazange abuzwe ukuthi angajoyina i-FCT kuze kube nguJanuwari 2013. Kuleyo imeyili, UHayes ucele iHammond kaMonsanto ukuba isebenze njengombuyekezi wemibhalo ethile yesandla ethunyelwe kulo magazini. UHayes uthe isicelo sosizo lukaHammond "senziwe nangoSolwazi uGoodman."
Ukuxhumana nge-imeyili kukhombisa ukuxhumana okuningi phakathi kwezikhulu zeMonsanto noGoodman njengoba uGoodman esebenzela ukuphikisa ukugxeka okuhlukahlukene kwamaGMO. Ama-imeyili ahlanganisa izihloko ezahlukahlukene, kufaka phakathi isicelo sikaGoodman sokufaka kukaMonsanto esifundweni saseSri Lankan esithunyelwe ku-FCT; ukuphikisana kwakhe nolunye ucwaningo olwathola imithelela eyingozi emmbileni weMonsanto GMO; nokuxhaswa kwephrojekthi kusuka eMonsanto nakwezinye izinkampani zezitshalo ze-biotech ezakha cishe uhhafu womholo kaGoodman.
Ngempela, ukushintshaniswa kwe-imeyili ngo-Okthoba 2012 kukhombisa ukuthi ngesikhathi uGoodman esayinela iphephabhuku le-FCT futhi egxeka ucwaningo lwaseSeralini, uGoodman wayebuye azwakalise ukukhathazeka kubaxhasi bezimboni zakhe ngokuvikela imali ayitholayo njengo “profesa onemali.”
Ku-imeyili ka-Okthoba 6, 2014, UGoodman ubhalele uMholi Wezindaba Zesayensi Yezokuphepha Kokudla eMonsanto uJohn Vicini ukusho ukuthi ubebuyekeza “iphepha elimelene nephepha” futhi unethemba lokuthola ukuholwa okuthile. Iphepha okukhulunywa ngalo licaphune umbiko wango-2014 ovela eSri Lanka mayelana "nokuchayeka / ukuhlangana okungenzeka kanye nendlela ehlongozwayo yobuthi be-glyphosate ehlobene nesifo sezinso." IGlyphosate iyisithako esiyisihluthulelo semithi yokubulala ukhula kaMonsanto's Roundup futhi isetshenziswa kuzilimo ezakhiwe ngofuzo zeRoundup Ready. I-World Health Organisation ngo-2015 yathi i-glyphosate iyingozi yomdlavuza womuntu ngemuva kocwaningo oluningi lwesayensi oluxhume nomdlavuza. Kepha iMonsanto igcina i-glyphosate iphephile.
Ku-imeyili eya kuVicini, uGoodman uthe wayengenabo ubuchwepheshe obudingekayo futhi wacela iMonsanto ukuthi inikeze "izimpikiswano ezizwakalayo zesayensi zokuthi kungani lokhu kungenangqondo noma kungenangqondo."
Ama-imeyili akhombisa ezinye izibonelo zokuhlonipha kukaGoodman kuMonsanto. Njengoba i-Le Monde iveza, NgoMeyi 2012, ngemuva kokushicilelwa kwamazwana athile nguGoodman kudaba olukuwebhusayithi esebenzisana nosaziwayo u-Oprah Winfrey, uGoodman ibhekene nesikhulu seMonsanto "ngokushiya umfundi ecabanga ukuthi empeleni asazi ngokwanele ngale mikhiqizo ukusho uma 'ephephile.'” UGoodman wabe esebhalela abantu eMonsanto, eDuPont, eSyngenta, eBASF naseDow naseBayer futhi uxolise "kuwe nakuzo zonke izinkampani zakho," sayingukuthi wayecashunwe kabi futhi engaqondakali.
Kamuva nge-imeyili eyodwa kaJulayi 30, 2012, UGoodman wazise izikhulu zaseMonsanto, eBayer, eDuPont, eSyngenta naseBASF ukuthi uceliwe ukuthi enze inhlolokhono neNational Public Radio mayelana nokuthi bukhona yini ubudlelwano phakathi kwezitshalo zeGMO nokwanda kokungezwani komzimba nokudla. Ekuphenduleni ngo-Aug 1, 2012, isikhulu eBayer samnikeza “ukuqeqeshwa kwabezindaba” mahhala ngaphambi kwengxoxo yakhe.
Ama-imeyili akhombisa nokusebenza ngokubambisana kukaGoodman neMonsanto ukuzama ukunqoba imizamo yokulebula ye-GMO. Nge-imeyili eyodwa ka-Okthoba 25, 2014 kumphathi wezindaba zesayensi yomhlaba wonke waseMonsanto u-Eric Sachs noVicini, uGoodman usikisela “imiqondo nemibono” ethile yezikhangiso ezingafundisa “abathengi / abavoti.” Ubhale ukuthi kubalulekile ukudlulisa "ubunzima bokunikezela kwethu kokudla" nokuthi ukuphoqelelwa okuphoqelekile kungangeza kanjani ezindlekweni uma izinkampani ziphendula ngokuthola izinto ezingezona eze-GMO. Wabhala ngokubaluleka kokudlulisa leyo mibono kwiSenate naseNdlu, kanye nethemba lakhe lokuthi "imikhankaso yokufaka amalebuli iyehluleka."
Ama-imeyili futhi enza kucace ukuthi uGoodman uncike kakhulu ekusekelweni kwezezimali okuvela eMonsanto ezinze eSt. Louis nakwezinye izinkampani zezolimo ze-biotech ezihlinzeka ngemali "I-Allergen Database" yenganyelwe nguGoodman bese idabula uHlelo Lokudla Kokungezwani Nomzimba kanye Nezinsiza eNyuvesi yaseNebraska. Ukubheka isivumelwano soxhaso i-database ye-allergen yango-2013 ikhombise ukuthi ngayinye yezinkampani eziyisithupha ezixhasayo bekufanele zikhokhe cishe ama- $ 51,000 ngesabelomali esiphelele sama- $ 308,154 alowo nyaka. Umxhasi ngamunye lapho-ke “anganikela ngolwazi lwabo kule nqubo ebalulekile,” kusho isivumelwano. Kusuka ngo-2004-2015, kanye neMonsanto, izinkampani ezixhasayo zazihlanganisa iDow AgroSciences, iSyngenta, iDuPont's Pioneer Hi-Bred International, iBayer CropScience neBASF. Invoyisi eyodwa ka-2012 eya eMonsanto kwiDatabase Allergen Database icele ukukhokhelwa kwe- $ 38,666.50.
Inhloso yalolu lwazi kuhloswe ngayo "ukuhlola ukuphepha kwamaprotheni angafakwa ekudleni ngobunjiniyela bezakhi zofuzo noma ngezindlela zokucubungula ukudla." Amandla okungezwani okungahlosiwe kokunye ukudla okunezakhi zofuzo kungenye yokwesaba okuvamile okuvezwa ngamaqembu abathengi kanye nabanye ochwepheshe bezempilo nabezokwelapha.
Kumazwana esitezi seNdlu, UJim McGovern (D-Mass.) Uthe amakhodi e-QR ayeyisipho embonini yokudla efuna ukufihla imininingwane kubathengi. Umthetho "akuyona into enentshisekelo kumthengi waseMelika, kodwa ukuthi yiziphi izinto ezimbalwa ezikhethekile ezifunwayo," esho. "Wonke umuntu waseMelika unelungelo eliyisisekelo lokwazi ukuthi yini ekudleni abakudlayo."
UGoodman, uMonsanto nabanye abasemkhakheni we-biotech ag bangabungaza ukunqoba kwabo kwiCongress kodwa umthetho omusha wokulebula kungenzeka ukhiqize kuphela ukungabaza kwabathengi ngama-GMO uma kunikezwa iqiniso lokuthi kuphikisana nohlobo lokuveza obala abathengi abafuna - amagama ambalwa alula uma umkhiqizo “wenziwa ngobunjiniyela bezakhi zofuzo.”
Ukufihla ngemuva kwekhodi ye-QR akunikezi ukuzethemba.
(Ishicilelwe okokuqala eHuffington Post http://www.huffingtonpost.com/carey-gillam/keeping-secrets-from-cons_b_10995998.html)
I-GMO, Ukukhangisa BASF, Bayer, UBruce Hammond, Dow, IDow AgroSciences, Dupont, U-Eric Sachs, Ukudla, Ucwaningo lwe-Allergy Food and Resource Program University yaseNebraska, Ukudla kanye Nezokwelapha Kwezolimo, Ukulebula kwe-GMO, UJohn Vicini, Monsanto, Pat Roberts, IPioneer Hi-Bred International, ezombusazwe, URichard Goodman, Syngenta, University of Florida, University of Illinois, IYunivesithi yaseNebraska, UWallace Hayes
Iviki Elikhulu labadlali beBig Ag Monsanto neDow
Posted on February 1, 2016 by UCarey Gillam
Umhlangano Wabaninimasheya weMonsanto Udonsa Umlilo
Abagxeki abaningi be-GMO kanye nabagxeki bemithi yokubulala izinambuzane bakhulume emhlanganweni waminyaka yonke wabaninimasheya weMonsanto Co. ngoLwesihlanu, Jan. 29 edolobheni lenkampani iCreve Coeur, eMissouri, becela inkampani ukuba ilungise ukukhathazeka ngemikhiqizo yezitshalo eyenziwe ngobunjiniyela kanye i-glyphosate-based Roundup herbicide esetshenziswe kulezo zitshalo.
Abamele amasheya, kanye nabanye abavela ezinhlanganweni ezingaphandle, batshele uSihlalo kanye noMphathi Omkhulu weMonsanto uHugh Grant ukuthi inkampani kufanele ithathe izinyathelo eziningana, kufaka phakathi ukubika nganoma yiziphi izinhlelo zokunciphisa ubungozi empilweni yabantu kanye nemvelo eboshwe kuRoundup kanye nesithako sayo esiyinhloko, i-glyphosate. NgoMashi 2015, ochwepheshe bomdlavuza beWorld Health Organisation bahlukanisa i-glyphosate ngokuthi “mhlawumbe i-carcinogenic kubantu.”Futhi IMonsanto ibhekene nezinsolo eziningi efakwe ngabasebenza emapulazini nabanye abathi iRoundup ibangele umdlavuza wabo.
"Njengoba kucatshangwa ukuthi cishe ingxenye yemali engenayo yeMonsanto ivela ku-Roundup nakwamanye ama-herbicides asuselwa e-glyphosate, ukufakwa kophawu lomkhiqizo oyinhloko wenkampani ngokuthi 'mhlawumbe yi-carcinogenic' akuyona inqubekela phambili ethembeni lenkampani," kusho uJohn Harrington, oyi-CEO yeHarrington Investments. esitatimendeni. Ukutshalwa kwezimali eHarrington ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokweluleka ngokugxila kuzinhloso zezemvelo nezenhlalo, futhi kunohlelo olusebenzayo lokukhuthaza abaninimasheya.
Kanye neHarrington Investments, abamele i-Organic Consumers Association, omama abaseMelika yonkana, amaSumofU, iWomen International League for Peace and Freedom, kanye neGMO Free Midwest waya emhlanganweni ukubhikisha ukukhushulwa kwenkampani iRoundup, abathi ababhikishi kuhlobene nezifo ezahlukahlukene.
Leli qembu litshele uMonsanto's Grant ukuthi kunezibalo ezandayo zezifundo ezizimele ezihlanganisa i-glyphosate nomdlavuza, ukukhubazeka kokuzalwa, isifo sezinso nokuphazamiseka kwamahomoni.
UGrant ukuphambukile ukugxeka wathi kokubili i-glyphosate ne-GMOs kukhonjiswe ukuthi ziphephile: “Lona yi-20th unyaka wokutshala ama-GMO, ”kusho uGrant. "Kutshalwe amahektare ayizigidi eziyizinkulungwane ezine emhlabeni ... ngaphandle kwenkinga eyodwa yezempilo. Le yimikhiqizo evivinywa kunazo zonke imboni yezokudla eyake yabona. ”
IMonsanto iletha cishe ama- $ 5 billion ngonyaka emholweni ovela ekuthengisweni kwe-Roundup nemikhiqizo ehlobene nayo.
Odokotela nososayensi baphakamise ukukhathazeka ngokuthambekela kwezempilo ezindaweni lapho abasebenzi basemapulazini nemiphakathi, njenge Hawaii futhi Argentina, Ukuvezwa okuphezulu kumakhemikhali asetshenziswa kuzilimo zeRoundup Ready, ezenzelwe izakhi zofuzo ukubekezelela ukufafazwa nge-glyphosate.
Ukuphindwa komsindo okulalelwayo komhlangano kuyatholakala kuwebhusayithi kaMonsanto ku- www.monsanto.com/investors.
UDow Uthola Inkantolo Iya Phambili Nge-Herbicide Entsha Engqubuzanayo
Inkantolo yenhlangano yokudlulisa amacala inikeze iDow AgroSciences ukunqoba emzameni wokuphikisana wale nkampani wokuletha umuthi omusha wokhula ezindaweni zamapulazi zase-US. I-herbicide entsha, ebizwa nge-Enlist Duo, ihlanganisa i-glyphosate ne-2,4-D, zombili ezixhunyaniswe nomdlavuza nezinye izinkinga zempilo.
The IChicago Tribune ibike kanjalo ukuthi iNkantolo Yokudlulisa Amacala yesi-9 yase-US isichithile isicelo se-US Environmental Protection Agency sokushiya ososayensi bayo abavuma u-Dow weedkiller ngo-2014 ngaphandle kokuchaza isizathu salo myalelo.
I-herbicide entsha kaDow yenzelwe ukubhekana nokumelana nokubulala ukhula okusabalele okubambe cishe amahektare ayizigidi ezingama-60 epulazini lase-US ngemuva kokusetshenziswa kabanzi kwe-glyphosate. IGlyphosate, isithako esiyinhloko seMonsanto Co's Roundup, yanda kakhulu ekukhiqizeni ummbila, ubhontshisi, ukotini nezinye izitshalo ngemuva kwezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo zeMonsanto ukumelana nokukhishwa kwamakhemikhali ngqo.
Faka i-Duo yakhelwe ukusetshenziswa ku- ummbila owenziwe ngokwezakhi zofuzo, ukotini kanye nobhontshisi ithuthukiswe yi-Dow ukuze ingavikeleki kumxube we-glyphosate-2,4D. NgoDisemba, i- IChicago Tribune yembule ukuthi i-EPA ivume u-Enlist Duo ngemuva kokuthi i-ejensi yehlise ubufakazi bezinkinga zezinso abacwaningi bakaDow uqobo abathi zibangelwe yi-2,4-D.
UDow uthe ubona umugqa we-Enlist wezitshalo namakhemikhali njengethuba lemakethe elingu- $ 1 billion.
Funda kabanzi lapha http://www.chicagotribune.com/news/watchdog/ct-dow-enlist-duo-court-ruling-20160127-story.html
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane IDow AgroSciences, EPA, Ukudla, GMO, Hugh, Monsanto, izibulala-zinambuzane
Ubani Odala Ukuhlaselwa Kwase-US Ilungelo Lokwazi?
Posted on Mashi 13, 2015 by UGary Ruskin
Kube nokuhlaselwa okumbalwa muva nje kwe-US Right to Know, ngakho-ke ngicabange ukuthi kungaba wusizo ukudweba ukuthi ngubani osemuva kwabo.
A Mashi 9 esihlokweni ku-Guardian wasigxeka ngokuthumela Izicelo ze-Freedom of Information Act ukuthola ukuxhumana phakathi kosolwazi abakhokhela intela kanye nomshini wePR womkhakha wezokudla. Bobathathu ababhali be-athikili bangabongameli bangaphambilini be-American Association for the Advancement of Science. Kepha lo mbhalo wehlulekile ukudalula izibopho zabo zezezimali.
Umbhali wokuqala, uNina Federoff ubizwa ngokuthi "ngu-Evan Pugh Professor ePenn State University" kodwa uyakushiya lokho isebenza e-OFW Law, okuyi-firmhouse yokudla kanye ne-agribusiness lobbying firm. Umthetho we-OFW ubhaliswe njengokunxenxa i- Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology futhi Syngenta.
Sacela izincwadi ezivela kubo bobabili iSyngenta ne-CBI - amalungu abo afaka phakathi “I-BASF, iBayer CropScience, iDow AgroSciences, iDuPont, Inkampani yeMonsanto neSyngenta”- ukuze siqonde ukuthi kungani uNks.
Umbhali wesibili, uPeter Raven, ukhonjwa njengoMqondisi Emeritus weMissouri Botanical Garden, ehlanganiswe kakhulu neMonsanto kangangokuthi ine Isikhungo saseMonsanto futhi IMonsanto Hall. Umtapo Wezincwadi kaPeter H. Raven esitezi sesine seMonsanto Center. A Ukukhishwa kwezindaba zika-2012 uthi, "Inkampani yeMonsanto neMonsanto Fund bebe phakathi kwabanikele kakhulu eMissouri Botanical Garden kule minyaka engama-40 edlule, banikela cishe ngamaRandi ayizigidi eziyishumi kumaphrojekthi amakhulu, isayensi nemfundo ngaleyo nkathi."
Umbhali wesithathu, uPhillip Sharp, usebenza eDavid H. Koch Institute eMIT - yebo, uDavid Koch ofanayo weKoch Brothers. Esihlokweni sabo, ababhali basifanisa nalabo abenqaba ukushintsha kwesimo sezulu. Okokuthi othile oxhunywe kwiKoch Institute ukuthi asixhumanise nabenqabayo ngokuguquguquka kwesimo sezulu akunakwenzeka. UDkt Sharp ubuye abe nobudlelwano obuseduze nemboni ye-biotech, njengomsunguli wenkampani iBiogen.
I-American Association for the Development of Science is esebenza njenge the Inhlangano yaseMelika Ekuthuthukisweni kweMonsanto. Lokho, ngokweqiniso, kuyilahleko yesayensi, nakithi sonke.
Futhi, iCornell Alliance for Science nayo besilokhu sihlasela i-US Right to Know futhi ukuhlela isikhalazo ngokumelene nezicelo zethu ze-FOIA mayelana nemboni yezolimo i-PR nemikhankaso yezepolitiki yokuvikela ama-GMO.
ICornell Alliance for Science yaqala ngonyaka owedlule nge “Isibonelelo sika- $ 5.6 million esivela kuBill & Melinda Gates Foundation, ”Isisekelo esikhulu kunazo zonke emhlabeni, okuyi- umgqugquzeli we futhi umtshali wezimali imboni yezolimo. Isikhulu esiphezulu seGates Foundation, uSue Desmond-Hellman, wasebenzela iminyaka eyishumi nane enkampanini ye-biotech iGenentech.
ICornell Alliance for Science ithi eyabo “Inhloso” ngukubukela phansi impikiswano ye-GMO, ”Kepha ukuhlasela iqembu lethu labathengi kuyindlela eyinqaba“ yokwehlisa isithunzi ”impikiswano ngemiphumela yezempilo nezemvelo yokudla nezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO I-AAAS, Association American for the Ukuthuthukiswa Isayensi, BASF, I-Bayer CropScience, Bill and Melinda Gates Foundation, I-Biogen, I-CBI, ICornell Alliance yeSayensi, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, UDavid H. Koch Institute, IDow AgroSciences, Dupont, I-Genentech, EMissouri Botanical Engadini, MIT, Monsanto, UNina Federoff, OFW Umthetho, Penn State University, UPeter Raven, UPhillip Sharp, USue Desmond-Hellman, Syngenta
I-US Farmers and Ranchers Alliance - amaqiniso asemqoka
Posted on January 21, 2015 by UGary Ruskin
* Abaxhasi bafaka iMonsanto neDuPont
* Abalimi abancane bakugxekile ukusetshenziswa kwemali edingekayo yokumaketha ukukhuthaza i- “Big Ag”
* Abanye ozakwethu bahlanganisa iBASF, iDow
* I-USFRA imelwe yi-PR giant uKetchum
* Amaklayenti kaKetchum afaka phakathi iRussia Federation
* Umsebenzi kaKetchum weRussian Federation uhlanganisa ukusunduza inkulumo-ze kaPutin, esiza emkhankasweni wokuba uPutin aqanjwe nge-Time Magazine ka-2007 “Umuntu Wonyaka”
* I-LA Times: "Inkulumo-ze yabalweli" exhaswa yi-USFRA
Abaxhasi Bafaka iMonsanto, iDuPont
Kusukela ngo-2011, i-USFRA bekufanele ibe nesabelomali seminyaka yonke esingu- $ 11 million.
Uxhaso lwaluzoqhamuka emalini ekhokhwayo yokumaketha uMnyango wezoLimo usiza ekuqoqeni kubalimi, nasezinkampanini ezinjengeMonsanto neDuPont, ngasinye sazo esazibophezela kumnikelo waminyaka yonke wama- $ 500,000. [New York Times, 9 / 27 / 11]
Isabelomali se-Organisation Now Claims "singaphansi kwe- $ 12 Million," Kepha Izinhlelo Zokukhulisa
I-USFRA ithi isabelomali sayo njengamanje "singaphansi kwezigidi eziyi- $ 12," kodwa "Ngokuhamba kwesikhathi, silindele ukuthi isabelomali sohlelo lwethu sikhule njengoba abahlanganyeli nabalingani bezimboni bejoyina inhlangano yethu." [http://www.fooddialogues.com/content/faqs]
Inhlangano Ibanga Okwesithathu Kwezimali Kuvela Kubalingani Bemboni
Ngokusho kwe-USFRA, amaphesenti angama-32 oxhaso lwayo luvela kozakwethu bezimboni.
"Amaphesenti angama-68 oxhaso lwethu luqhamuka kwabasebenzisana nabaholi abaholwa ngabalimi," kusho leli qembu. [http://www.fooddialogues.com/content/faqs]
Ozakwethu Bafaka i-BASF, iDow, Merck nabanye
“Iqembu likaPremier Partner Advisory Group” le-USFRA lifaka phakathi iDuPont neMonsanto, kanti i- “Industry Partner Council” yayo ifaka iBASF, Cargill, Dow AgroSciences, i-Elanco Animal Health, iMerck Animal Health, iSyngenta neZoetis. [http://www.fooddialogues.com/content/affiliates-board-participants-and-industry-partners]
Imali yabalimi abancane ecasulwa yimali ekhangiswayo yokumaketha esetshenziselwa ukukhuthaza i- “Big Ag”
Embhalweni kaJanuwari 2014, Bloomberg Businessweek ubike ukuthi abalimi abancane bebekhala ngokusetshenziswa kwemali yokuphoqelela eyimpoqo, noma ama-checkoffs, ukuxhasa i-USFRA, bethi kufanele "baphambukele imali ukuxhasa imisebenzi nokukhangisa okuzuzisa ibhizinisi lezolimo, kepha hhayi labo abanemisebenzi emincane naphakathi nendawo . ”
Lo mbhalo waphawula ukuthi abalingani kanye nabalingani be-USFRA “kumane kuyizinhlobo zamaqembu ajwayele ukuhlotshaniswa ne-Big Ag,” nokuthi izindatshana ezikwi-USFRA zivame ukuxhasa ezolimo zezimboni, kufaka phakathi ukuxhasa izinzuzo zezitshalo ezishintshwe izakhi zofuzo.
Kodwa lokhu kubangele intukuthelo evela kubalimi abancane, kubandakanya noMike Callicrate, umfuyi waseColorado owathi wakuthola “kucasula kakhulu” ukuthi i-USFRA ithola imali ekhokhiswayo yokuthengisa.
"Inhloso yalokhu kuhlolisiswa okwenziwe [USFRA] ukukhuthaza ezolimo zezimboni ezixosha ipulazi lomndeni ngaphandle kwebhizinisi," kusho uCallicrate. [Bloomberg Businessweek, 1 / 29 / 14]
I-PR Giant Ketchum imele i-USFRA
Ngo-2011, i-USFRA yamemezela ukuthi i-PR giant uKetchum uzosebenza njengenhlangano eyinhloko yezokuxhumana. [I-Agri-Pulse, 3/24/11]
Uhulumeni waseRussia Phakathi Kwamaklayenti KaKetchum, Usiza u-Putin Akhiqize Inkulumo-ze
Kusukela ngo-2006, uKetchum usebenze njengefemu ye-PR yeRussian Federation, esiza uhulumeni waseRussia ukubeka izingcezu zemibono emithonjeni yezindaba zaseMelika, kufaka phakathi New York Times, iHuffington Post neMSNBC.
Elinye lamakholomu avuliwe, avele kufayela le- New York Times, yanyatheliswa ngaphansi komugqa womugqa kaVladimir Putin. [I-ProPublica, 9/12/13; New York Times, 8 / 31 / 14]
The New York Times yabika ngo-2014 ukuthi “Inkampani isasebenza nabeluleki abaseduze bakaMnu. Putin, ngokusho kwabasebenzi baseKetchum bamanje nabakade besebenza.
The Times ibike ukuthi uKetchum “uthe kusebenzisana nephephabhuku i-Time ukuthi uMnu. Putin aqambe igama lalo magazini ngokuthi Umuntu Wonyaka.” [New York Times, 8 / 31 / 14]
U-Ketchum Umele Inkampani Yezamandla Elawulwa Nguhulumeni waseRussia iGazprom
Kuze kube muva nje, uKetchum ubesebenza njengefemu ye-PR yenkampani yezamandla elawulwa nguhulumeni waseRussia, iGazprom. [New York Times, 8 / 31 / 14]
UKetchum usebenzele iDow Chemical
UKetchum usebenzele (futhi angaqhubeka nokusebenzela) iDow Chemical. [Amarekhodi enkantolo eDC]
Amanye amaklayenti e-Ketchum afaka phakathi izinkampani ezidayisa izidakamizwa, izinkampani zamakhemikhali, abakhiqizi bokudla
I-Procter & Gamble
[Idatha Eqinile Yobudlelwano Bomphakathi ne-O'Dwyer]
I-LA Times"Idokhumentari Yesimo Sokuxhaswa Kwabantu Nge-USFRA"
NgoMeyi 2014, i Los Angeles Times ushicilele ukubuyekezwa kwedokhumentari Ipulazi, lokho kwenziwa "ngokuxhaswa ngokukhululekile" kwe-USFRA.
The Times Ukubuyekeza kuthi le filimu "ivame ukuphuma njengenkulumo-ze yokucela usizo," kanye "nocezu lokukhukhumeza." Ngenkathi idokhumentari iqukethe abalimi abasekela baphikise inqubo yokulima engokwemvelo, ifilimu “ayinikezi izibalo noma ochwepheshe abangahlangene ukuxhasa noma ukuphikisa noma yiziphi izimangalo zabalimi futhi inikeze umbono obanzi.” [Los Angeles Times, 5 / 1 / 14]
Ukudla Okucatshangwayo, IHholo Lamahloni BASF, I-Cargill, Inkampani yeClorox, Dow, IDow AgroSciences, Dupont, I-Elanco Animal Health, UFritito-Lay, I-Gazprom, Hershey sika, UKetchum, Merck Animal Health, Monsanto, Pfizer, I-Procter & Gamble, Putin, Russia, Inhlangano yase Russia, Syngenta, I-US Farmers and Ranchers Alliance, USFRA, I-Wendy's International, I-Zoetis